5 lita karama okpu
ALL ngwaahịa Categories
New Patent ọkara akpaka PITA ịfụ igwe (Patent Mba 201720832440.2)
site ha na 19-08-07
Nke a bụ ihe zuru ezu ọhụrụ ọkara akpaka PITA karama fụrụ opi igwe usoro. The ngwá unit na-agụnye: elu nsogbu ikuku Compressor - elu nsogbu pipeline - elu nsogbu gas tank - elu nsogbu ultra iyo - elu nsogbu gas na friji draya - Heating Group -...
Plastic okpu nkọwa
The plastic karama okpu bụ a jikọrọ plastic maka mkpakọ ịkpụzi, extrusion ịkpụzi, Ọgwụ na ịkpụzi, igbu ịkpụzi na ala ụfụfụ ịkpụzi, na tumadi mejupụtara a Nchikota a na-anwụ nzukọ mkpụrụ, a na-anwụ nzukọ a na a na-anwụ Nchikota kaadị. A concave ebu nke a agbanwe uji eze, a ntụmadị ha ...
Okwu Mmalite nke ọtụtụ nwoke ịga ụlọ ọgwụ ụzọ maka plastic karama okpu
Ọtụtụ di iche iche nke nwoke ịga ụlọ ọgwụ ụzọ maka plastic karama na okpu na-ẹkenam ke ojiji nke plastic karama. The ịdị ọcha edebeghị ihe ọcha ọdịdị nke plastic karama bụ na-echegbu anyị, karịsịa maka karama ndu. N'ihi na e nwere na-adịghị ọcha ihe na karama okpu mgbe aṅụ, ọ nwere ike na-ada n'ime ...
Address Number 101 Shenfeng village.Xinqi n'okporo ámá, Beilun, Ningbo, Zhejiang, china. 315020
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko na-ahapụ ka anyị na anyị ga-enwe na aka na 24 awa.
Non-ikwafu 5 lita Bottle Cap, 5 lita Plastic Water Bottle Cap, Recycling Bottle Caps, Silicone Bottle Cap, Non-Spill Custom Bottle Cap, Bottle Cap,